Kuo wuxuu sharraxayaa sida MacBookga xiga uu noqon doono | Waxaan ka imid mac
Ming-Chi Kuo ma nasto xataa bisha Ogosto. Falanqeeyaha deegaanka Apple ee caanka ah ayaa mar kale garaacay furayaasha kombiyuutarkiisa, markanna waa jiilka xiga ee MacBooks Air oo la sii deyn doono sannadka dambe.
Wuxuu sheegay inay qaadan doonaan naqshadda cusub ee bannaanka ee dhismaha MacBook Pro 14 iyo 16 inji oo aan arki doonno dayrtaan, iyo sidoo kale midabyo kala duwan. Wuxuu kaloo ka hadlay shaashadda, iyo taariikhaha la sii daayay.
Falanqeeyaha Kuuriya ee deegaanka Apple ayaa shalay u diray war -saxaafadeed cusub saamileyda shirkadda halkaas oo uu ku sharraxayo astaamaha kala duwan ee cusub MacBook Air kaas oo Apple durba ka shaqeynayo.
1 Naqshadeynta dibedda
2 Bandhigga Mini-LED
Kuo wuxuu sharraxay in noocyo kala duwan oo ah MacBooks Air ay qaadan doonaan naqshadda dibedda ee MacBooks Pro ee soo socota oo la bilaabi doono dayrtaan. Waxaa sidoo kale lagu soo saari doonaa si la mid ah midabo kala duwan.
Warbixinta, waxay ku tilmaamaysaa in BOE ay noqon doonto alaab -qeybiyeyaasha ugu weyn ee looxyada mini LED, taas oo ay durba soo saareyso si guud. Apple waxay bilaabeen inay ku soo bandhigaan noocyadan guddiyada shaashadda cusub ee iPad Pro 12,9-inch.
Aaladaha soo socda ee lagu dhejin karo tiknoolojigan soo -bandhigga ayaa noqon doona kan xiga 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro in la sii daayo waqti yar. Marka xigta, MacBook Air ayaa sidoo kale lagu sii dayn doonaa shaashadda mini-LED-ka ah.
Saadaasha Kuo ayaa ah in noocyada cusub ee MacBooks Air la bilaabi doono badhtamaha 2022. Dhanka processor-ka, ma aysan doonayn inay “qoyaan” badan tahay. Wuxuu yiri sida iska cad waxay noqon doonaan Apple Silicon, laakiin ilaa maantadan ma oga inay kor u qaadi doonaan isla processor -ka M1 ee hadda jira oo aan hore u naqaannay, ama ay horeba u ahaan lahayd horumar, M2.
Wuxuu rumeysan yahay in jiilka cusub ee MacBook Air ay si weyn u aqbali doonaan isticmaaleyaasha, oo leh tirooyin iib ah oo ku saabsan 8 milyan oo cutub 2022.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Kuo wuxuu sharraxayaa sida MacBookga xiga uu u ekaan doono